AHOANA NO HAMAHANA NY SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ERROR AMIN'NY WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Famahanana SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Fahadisoana ao amin'ny Windows 10
Ny famahanana ny kilalaon-teny dia manampy ny tsy handalo fotsiny, fa ny fampiasana ny saina koa. Fahiny dia nalaza ireo gazety, izay nisy ireo piozila maro mitovy, saingy ankehitriny dia voavaha amin'ny ordinatera izy ireo. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mampiasa fomba isan-karazany manamboatra ny fanavakavahana.
Mamoròna tsipika mivalo eo amin'ny solosainao
Ny famoronana psicily toy izany eo amin'ny ordinatera dia tsotra, ary fomba maro no hanampy amin'izany. Amin'ny fanarahana torolàlana tsotra, afaka mamorona haingana piozila ianao. Andeha hojerentsika ny fomba rehetra amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Fomba 1: Tolotra Aterineto
Raha tsy misy faniriana ny hamandrihana programa, dia manoro hevitra izahay fa hampiasa tranonkala manokana izay namoronana ireo karazan'ity karazana ity. Ny tsy fahampiana io fomba io dia ny tsy fahafahana mametraka fanontaniana any amin'ny takelaka. Tsy maintsy mamita ny programa fanampiny izy ireo na manoratra eo amin'ny taratasy hafa.
Ny mpampiasa dia takiana fotsiny ny mandefa ny teny, mifantina ny fametrahana ny tsipika ary mametraka ny safidy save. Ny tranonkala dia manolotra ny sary PNG na mamonjy ny tetikasa ho toy ny latabatra. Ny serivisy rehetra dia miasa arakaraky ity fitsipika ity. Ny loharanom-bola sasantsasany dia manana ny fandefasana ny tetikasa efa vita amin'ny tonian-dahatsoratra na mamorona dika iray ho an'ny fanontana.
Vakio bebe kokoa: Mamorona crosswords anaty aterineto
Fomba 2: Microsoft Excel
Microsoft Excel dia tonga lafatra amin'ny famoronana piozila iray. Ilaina fotsiny ny manao sela kareza ao amin'ny cellules rectangular, aorian'izay dia afaka manomboka manangana ianao. Mijanona ho anao ny miara-mivoaka na manofa toerana iray misy sarisary, mametraka fanontaniana, mijery ny marina sy ny teny mifanandrify.
Ankoatra izany, ny fonosana Excel dia manome fahafahana anao hamorona algorithm auto-check. Izany dia atao amin'ny fampiasana ny asa "Concatenate", mampifanaraka ny teny amin'ny teny iray, ary mila mampiasa izany "RAHA"hanamarina ny fidirana. Tokony hanaraka ny teny rehetra ny hetsika toy izany.
Vakio bebe kokoa: Mamorona piozila amin'ny teny mozika ao amin'ny Microsoft Excel
Fomba 3: Microsoft PowerPoint
PowerPoint dia tsy manome mpampiasa fitaovana iray izay ahafahanao mamorona mora foana ny piozila. Saingy misy lafiny maro mahasoa. Ny sasany amin'izy ireo dia hahasoa mandritra ny famonoana ity dingana ity. Ny fampisehoana eo amin'ny latabatra dia azo jerena ao amin'ny fampahafantarana, izay tena tsara ho an'ny fototra. Avy eo ny mpisera tsirairay dia manan-jo hanova ny endriky sy ny famolavolana laharana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo sisintany. Vao mainka manampy ny labels fotsiny izy io, alohan'ny hanitsiana ny tsipika.
Amin'ny fanampiana ireo soratra ireo ihany no hametrahana ny laharana sy ny fanontaniana raha ilaina. Ny endrik'ilay taratasy, ny mpampiasa tsirairay dia mifanaraka amin'ny fomba hitany fa mety, tsy misy torolalana sy torohevitra manokana. Azo atao amin'ny fampisehoana ny fampiasana fitenenana efa vonona hatao vao haingana, ampy fotsiny ny manangona ny taratasy vita printy mba hampidirana azy amin'ny tetikasa hafa amin'ny hoavy.
Vakio bebe kokoa: Mamorona piozila amin'ny teny mozika ao amin'ny PowerPoint
Fomba 4: Word Microsoft
Ao amin'ny Word, azonao atao ny manampy takelaka iray, zarao amin'ny sela ary manoritsoritra azy amin'ny fomba rehetra azo atao, izay midika fa tena azo atao ny mamorona haingana ny fitenenana tsara ao amin'ity fandaharana ity. Miaraka amin'ny fampiarahana ny latabatra ary mendrika ny manomboka Ampahafantaro ny isa misy ny andalana sy ny tsanganana, ary alao ny toerana misy ny laharana sy ny sisiny. Raha mila manitsy bebe kokoa ny latabatra ianao dia jereo ny sakafo. "Properties table". Misy ny fari-pehezan'ny tsanganana sy cellules ary andalana.
Ny fametrahana ny latabatra amin'ny fanontaniana ihany no mijanona, satria efa nanao teti-bola ho an'ny fanamarinana ny fifandrifian'ny teny rehetra. Eo amin'ny takelaka iray ihany, raha misy toerana dia ampio fanontaniana. Mamonjy na manonta ny tetikasa efa vita rehefa vita ny dingana farany.
Vakio bebe kokoa: Manala piozila amin'ny teny MS izahay
Fomba 5: Fandaharam-pampianarana momba ny famoronana soratra
Misy programa manokana miaraka amin'ny fanampian'ny piozila misy piozila. Andeha isika handray ny CrosswordCreator ho ohatra. Ao amin'ity rindrambaiko ity dia misy ny zavatra rehetra ilainao ampiasaina mandritra ny famoronana hadisoana. Ary ny dingana atao dia tanterahana amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy:
Ao amin'ny latabatra voatondro, midira ny teny rehetra ilaina, mety hisy ny isa maromaro amin'izy ireo.
Safidio ny iray amin'ireo algorithm preset ho an'ny fitambaran-tsoratra. Raha toa ka tsy mahafinaritra ny vokatra, dia azo havaozina mora foana izany.
Raha ilaina dia amboary ny endriny. Azonao atao ny manova ny endri-tsoratra, ny habeny sy ny loko, ary ny loko samihafa amin'ny latabatra.
Crossword ready. Ankehitriny dia azo kopia na voavonjy ho toy ny rakitra.
Ny programa CrosswordCreator dia nampiasaina hanatanterahana io fomba io, na izany aza, misy rindrambaiko iray hafa izay manampy amin'ny fanaovana fanasivanana. Izy rehetra dia manana endrika sy fitaovana miavaka.
Famintinana, te-hanamarika aho fa ireo fomba rehetra ireo dia mifanentana tsara amin'ny famoronana pseudo-crossword, izy ireo dia tsy mitovy amin'ny fahasarotana sy ny fisian'ny asa fanampiny izay ahafahanao manao ny tetikasa ho mahaliana sy tsy manam-paharoa.
https://termotools.com mg.termotools.com © Windows 2019